QODOBBADA WAXTARKA LEH EE TUFAAXA IYO KA HORTAGGA ISTICMAALKA - CUNNOOYINKA DAAWADA DHAQANKA
Mandarin waa geedka qulqulka leh ee qiyaas dhexdhexaad ah (ilaa afar mitir oo dherer) ama baadiyaha. Miraha citrus waxay gaartaa lix santimitir oo wareeg ah. Qaababka miro waxay u egtahay kubbadda sareysa ee kor ku xusan. Maqaarka midhaha waa khafiif, oo si dabiici ah ugu xiran xarumaha. Miro ayaa ka kooban 8-13 xaleef, casiir leh ama macaan ama macaan oo macaan. Qaybaha miro ayaa si fiican uga soocaya midba midka kale, jidhku waa midab casaan ah. Haddii aan laga reebin, miraha citrusku waxay leeyihiin ur wanaagsan oo nadiif ah.
Miraha tufaaxa ayaa loo isticmaalaa saxanka cusub, waxaa loo isticmaalaa in ay sameeyaan waxqabadyo iyo ilaalin, saxarado, soo saaraan miraha dufanka leh, salad miro, iyo sidoo kale loo isticmaalo sida bahalka. Peel waxaa loo adeegsadaa daawada loogu talagalay soo saarida saliidaha carafka, tinctures, sharoobada, daawooyinka. Inkasta oo ay hanti ahaan faa'iido leh, moosaasiyadu waxay leeyihiin khilaaf.
Ma taqaanaa? Waxaa la aaminsan yahay in mandarinchika dalkan hooyo - celcelis qoraxda.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay mandarins: fitamiinnada, yaryar iyo macruufiyeyaasha
Waxyaabaha kiimikada ee kalluunka ayaa u oggolaanaya inay u dhigmaan superfruit. Sababtan darted, waxaa loo tixgeliyaa badeecad cunto badan iyo batteriyaal aad u fiican oo nafaqo leh.
100 g oo ah soodhafku waxay leeyihiin qaabka soo socda:
ilaa 88% qoyaan;
ilaa 2% dheefta cuntada;
ilaa 12% karbohidraatka.
Miraha kuma jiraan fitamiino, laakiin sidoo kale waxyaabaha yaryar iyo macro. Fikradaha kala duwan ee noocyada B, fitamiinada A, K, D, P iyo C waxay ku jiraan miraha liinta, jidhka waxaa ka mid ah asiidhyada dabiiciga ah, sonkorta iyo phytoncides ka kooban. Laga soo bilaabo micro-iyo macroelka, miraha waxaa lagu buuxiyaa birta, kalsiyum, potassium, fosfooraska, sodium, magnesium, choline iyo lutein. Meelaha Sambabada waxaa ku jira sheyga. Iyada oo qayb ka ah saliidaha muhiimka ah ee saliidaha, saynisyahannadu waxay ogaadeen joogitaanka carotene, α-limonene, citral, aldehydes, khamrado, maadada anthranilic acid methyl. Joogitaanka qaybahaas gaarka ah waxay siineysaa dhadhan qaas ah oo urta miraha iyo caleemaha geedka.
Waa muhiim! Qalabka faa'iidada leh ee mandarinnadu waa mid aan laga fogeyn, waxaana jira waxyaabo ay ka horjoogsadeen isticmaalka. Wax kastaa wuu ku fiican yahay dhexdhexaadinta.
Waxaa la aaminsan yahay in tufaaxa ay saameyn wanaagsan ku yeelan karto dheefshiidka waxayna caawineysaa inuu kordho cunto yaryar. Xilliga jiilaalka, ilka ugu wanaagsan ee fiitamiinada ah ma heli kartid. Tangerines sidoo kale waxay leedahay saameyn ku ah hababka dheef-shiid kiimikaad ee jirka aadanaha. Isticmaalka joogtada ah ma aha oo kaliya miro, laakiin sidoo kale casiir cusub ayaa ka caawiya xoojinta nidaamka difaaca.
Faytoomiyeyaasha ku dhex jira miraha waxay leeyihiin saameyn lid ku ah bakteeriyada. Thanks to phytoncides, juice mandarin waxay joojisaa faafinta cudurada fangaska oo keena cudurrada maqaarka ee jirka. Casiirka iyo miraha mandarinnada daaweeya xanuunka dysentery. Inta lagu jiro cillad-xilliyeedka ama dhiigbaxa culus, mandariin waxaa loo isticmaalaa sida styptic.. Neefsashada mandarin ee la qalajiyey ayaa sidoo kale leh hanti waxtar leh. Marka daadinta shaaha, waxay leedahay saamayn deg deg ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa diyaarinta decoctions neefsashada ee cudurada sambabka iyo neefsashada.
Dhowaan, saynisyahannadu waxay xaqiijiyeen in cunidda mandarinnadu ay yarayso halista cudurrada wadnaha, waxay dejinayaan heerarka insulinta ee bukaanka qaba sonkorowga, waxay ka caawisaa yaraynta heerarka dhiigga ee dhiigga, oo hoos u dhigaya harraad heerkulka jidhka ee sareeya inta lagu jiro dureyga.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo geed geedka jiirka ah ee da'da soddon jirka waxaad ka qaadan kartaa ilaa toddoba kun oo miraha.
Isticmaalka kilyaha ee daawada
Iyada oo ay sabab u tahay ficil fara badan oo ah walxo waxtar leh oo ku jira miraha, mandarin ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Daaweynta iyo ka hortagga cuduro badan, labadaba miraha iyo caleemaha labadaba ayaa loo isticmaalaa, kuwaas oo sidoo kale leh hanti iyo faa'iido u gaar ah. Si aad u jilciso qulqulka quficidda qiyaasta waxaa loo isticmaalaa decoction ee diirka cusub ee la jajabiyey ee tangerines. Laba qaado oo tufaax ah ku shub 300 ml oo biyo ah karkaraya iyo karkari ilaa labaatan daqiiqo oo ka baxsan kuleylka hooseeya. Cabitaanka sunta ee keentay qaboojiyey dhammaan maalinta.
Daaweeynta joojinta daawada waxay isticmaali kartaa hal galaas oo casiir ah oo saddex jeer maalintii, soddon daqiiqo cuntada ka hor. Daaweynta waxaa la sameeyaa saddex maalmood. Ka saarista gooryaanka jidhka ka hor inta aan la seexin waxay isticmaalaan caloosha jilciya. Xabashida ayaa lagu daaweeyaa jilicsan la jajabiyey. 0.5 qaado shaah lagu daray cuntada (jiis, boorash) iyo cun.
Waa muhiim! Cunista tufaaxa ayaa lagula talinayaa subaxa.
Qodobka faa'iido leh ee diirka miro ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo fangaska ciddiyaha. Qalac yar oo jilicsan oo xoqan ilaa saddex jeer maalintii. Si aad wajiga u siiso midab qurux badan iyo baabi'iyo laalaabkii, maaskariin labeen dhanaan, diiray dhirta dufanka iyo buskudka (wax kasta waa isku dhafan yahay 1: 1: 1). Ku rid maaskaro wajiga iyo qoorta kuna hayso ilaa labaatan daqiiqo. Koorsada daaweynta 20 maalmood ayaa ku siin doonta saameyn weyn oo ku habboon. Si aad u yareeyso sonkorta u qaado decoction ee diirka of tangerines dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah, la karkariyey litir biyo ah toban daqiiqo. Maraqku waa la kariyey, lakulmay, waxaana la qaataa maalintii oo dhan halkii biyo ah.
Maadaama ay ka hortageyso hargabka iyo tincture hargabka waxaa loo isticmaalaa: Tilmaamo jilicsan oo la jarjaray (2 qaado) ayaa lagu shubay galaas oo ah vodka oo lagu sawiray laba toddobaad. Ka dibna tafaftiro tincture, adoo gashanaya jilibka, oo qaado 20 dhibcood labaatan daqiiqo cuntada ka hor, laba jeer maalintii.
Si aad u dejisid niyaddaada adoo isticmaalaya mandarin miro, ku rid weel dhalada leh dabool. Dhammaan waxyaalaha lagaaga baahan yahay waa inaad furka daboolka dhowr jeer maalintii furo oo aad neefsatid ugxan-jilicsanaanta jilibka. Faa'iidooyinka faa'iido leh ee caleemaha mandarin aan si buuxda loo fahmin, sidaa daraadeed wax yar ayaa laga ogyahay iyaga. Caleemaha Mandarin waxaa loo isticmaalaa xaaladaha xanuunka caloosha iyo mindhicirka. Qaado 4 caleemood ee mandarin, ku shub biyo iyo karkari ilaa shan iyo toban daqiiqo. Maraqku waa la qaboojiyaa waxaana la qaadaa 100 ml saddex jeer maalintii.
Dhibaatooyinka dareemayaasha iyo hoomada, waxay isticmaalaan decoction diyaar ah dhowr caleemo qalajiyey iyo laba qaado oo diirka la qalajiyey, la kariyey ee litir oo biyo ah. Khilaafaadka: idiosyncrasy ee badeecada iyo cudurada caloosha, taas oo aad u sii xumeyn kara marka la qaato mandarins.
Ma taqaanaa? Mandarin waa miro aan ku jirin naadarro sababtoo ah lama huraan la'aanteed oo leh citric acid ku jirta miraha liinta.
Waxyeelada ka soo baxa tangerines
Faa'iidooyinka iyo waxyeelada ka imaanaya tangerines waxay ku xiran tahay tayada alaabta iyo qadarka isticmaalka, Xaddidaadda isticmaalka malaayiinnada cuntadu waa dadka qaba cudurada:
gasacsaydh, boogo, colitis, enteritis sababtoo ah saameynta mandarooyinka kororka acidity iyo dareenka xuubka xabka ee mareenka caloosha;
cholecystitis, pancreatitis, sababta oo ah acid waxay kicisaa wax soo saarka. Cuduradan oo kale ah beerka, socodka xitaa waa dhibsanayaa;
Cagaarshow fayraska ah ee ba'an, neefrir xanuun leh.
Sidoo kale xusuusnow in miraha citrusku yahay xasaasiyad xoog leh. Waa in la cunaa taxadar leh dadka qaba sonkorowga, oo si tartiib tartiib ah loogu soo bandhigo cuntada carruurta yaryar.
Waa muhiim! Carruurta ka yar hal sano oo cunista miraha liinta ayaa si adag loo mamnuucay.